‘विश्वका अन्य देश विकासको चुचुरोमा पुगिसके, हामी चाँही अझैं प्रहरी चिन्न र न्यायाधीश किन्न व्यस्त छौं’ « News24 : Premium News Channel
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालय शुद्धिकरण अभियान थालेका छन् । जस अन्तर्गत लेटेस्ट न्युज यो छ कि ३३ किलो सुन काण्डका अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दिने ५ जना न्यायाधीशहरु एकै पटक कारवाहीमा परेका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन काण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्धा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीशहरु सचिवालयमा तानिएका छन् ।
सम्भवत उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एकै पटक, यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको यो पहिलो रेकर्ड हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यभार सम्हाले लगत्तै न्यायाधीश उपर आउने गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाएका छन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले विवादस्पद न्यायाधीश दिपकराज जोशीका अति विवादस्पद निर्णयहरु उल्ट्याई सकेका छन् । केही उदाहरण दर्शकहरुको जानकारीका लागि राख्न चाहान्छु । राणा प्रधान न्यायाधीश भए लगत्तै यस अघि हेर्दा हेर्दैमा राखिएका आर्थिक चलखेल, राजश्व छली र ठुला भ्रष्टाचारका मुद्धाको इजलाश परिर्वतन गरेका थिए ।
राणाकै इजलाशले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको रकम झिक्न दिने दीपकराज जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेका थिए । अनि न्याय सम्पादनमा बदनियत देखिएपछि लतिलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्याय परिषद् सचिवालयमा तानेका थिए ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने सर्वसधारणसँग अवैध असुली गरेको संस्थालाई न्यायात्रीश आत्रेयले सफाई दिएपछि दालमा कुछ काला हे होइन पूरै दाल मासका हे भन्दै उनी विरुद्ध न्याय परिषदमा समेत उजुरी परेको थियो । विचौलियाले थला पारेको न्यायलयमा एउटा आशाको किरण झुल्किएको देख्न सकिन्छ ।
सीधाकुरा गर्ने हो भने यो मुलुकमा हरेक व्यक्ति पावरफूल छ । आफूले डाइरेक्ट पावरफुल मान्छे नचिने पनि पावरफुल मान्छे चिन्नेहरु यहाँ पसल पसलमा पाइन्छन् । नेतै नेता भएको यो देशमा एउटा नेता नचिन्ने को छ ? नेताले प्रहरी चिनेको छ, प्रहरीले मुद्धा कमजोर बनाएर अदालतमा पेश गरिदिन्छ ।
नेता र प्रहरीलाई चिन्यो, न्यायाधीश पैसाले किन्यो । सुन्दा नमिठो लाग्ने यो सत्यले धेरैलाई रुवाएको छ । बोल्न नमिल्ने र देखाउन नमिल्ने भएर मात्रै हो तर हाम्रा सम्पर्कमा आउने पीडितहरुलाई देशको न्यायलय प्रति विश्वास छैन ।
उचित प्रमाणको अभावमा हामी न्यायालयका बारेमा सकेसम्म कम बौल्छौं, तर न्याय पाउन पैसा चाहिन्छ, भन्नेहरुको भीड टुडिखेलमा अट्दैन । छोटो समयमै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ज्युले देखाउनु भएको यो तत्परताले एउटा गतिलो आशा पलाएको छ ।
यो मुलुकका टप ५, ५ जना मानिसले चाहने हो र यो माटो समातेर ज्यानको परवाह नगरी काम गर्ने हो भने यो देशको काया पलट हुन्छ । १ प्रधानमन्त्री, अर्थात सरकार प्रमुख, २ प्रधानन्यायाधीश, अर्थात न्यायालय प्रमुख, ३ अख्तियार प्रमुख, ४ प्रहरी प्रमुख, र ५ सम्पत्ती सुद्धिकरणका प्रमुख ।
यी सारा प्रमुखहरुको मुख एउटै हुने हो भने यो मुलुक बनाउन यति धेरै कन्नै पर्दैन । कहाँ कहाँ कसरी कसरी, कर छलिन्छ, सम्पत्ति लुकाइन्छ र विदेश पु¥याइन्छ भन्ने कुराको इतिवृती यी ५ जनालाई कण्ठस्त छ ।
अख्तियार जस्तो आयोग सय हजारे र लाखे घुस्याहा समातेर बस्या छ । प्रमुख अभियुक्त ज्यु, सय हजार खानेहरु दिनमा २ जना त हामी नै समाइदिन्छौ । देश विदेशमा करोडौं करोडको सम्पत्ती जोडेकाहरु तिर तपाईहरु लाग्नुस न । दि इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिष्टस् आइसिआइजेले उपलब्ध गराएको विवरण र खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले गरेको थप अनुशन्धानमा ५५ जना नेपालीको विदेशमा लगानि देखियो ।
कतिपयले ट्याक्स हेवन अर्थात कर छलिका लागि अनुकुल देशमा लगानि गरेको भेटियो । गैर आवासिय नेपालीलाई विदेशमा लगानि गर्न कानुनले रोक त लगाएको छैन तर लगानिको स्रोतमा अनुशन्धान गर्ने कसले ?
संसारका अरु देश विकाशको चुलीमा पुगिसके हामी अझै प्रहरी चिन्न र न्यायाधीश किन्न व्यस्त छाँै । कहिले काँही मलाई लाग्छ यी सब कुरा फुटबलको गेम जस्तै हो । हामी स्टेडियमको वरिपरि बसेर हेरेका दर्शकहरुलार्इं लाग्छ, त्यो खेलाडीले उ त्यो खेलाडीलाई पास दियोस, त्यसले छलाओस र गोल गरोस ।
हेर्ने दर्शक भन्दा कयाँै गुणा राम्रो खेलाडी हो तर उ गोल गर्न सक्दैन । सायद जनता र शासक प्रशासकमा यही फरक छ । सारा जनताले देखेको भ्रष्टाचार घुसखोरी, अन्याय, अपराध, मेस्सी भन्दा खतरा खेलाडीका रुपमा रहेका शासक प्रशासकले ज्यान गएपनि देख्दैनन् ।
सेन्टर बाटै र कर्नरबाटै गोल हान्न परेन तर किपर नै नभएको खाली गोल पोष्टमा पनि गोल हान्न नसक्ने खेलाडीहरु पटक पटक मैदानमा आउँदा यति हारियो यति हारियो कि ७० लाख जनताले स्टेडियम नै छाडे र इमिग्रेशनको गोल पोष्टबाट छिरेको बल प्लेन चढेर आउट भई खाडी, युरोप, अष्टे«लिया अमेरिका पुगे ।